လာမည့်ဆယ်စုနှစ်အတွင်းကမ္ဘာတလွှားတွင် ထိခိုက်မှုအများဆုံ ဖြစ်ပေါ်စေမည့်အန္တရာယ်(၅)မျိုး - Tameelay
(၄) ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းအားလျှော့ချခြင်း နဲ့
လာမညျ့ဆယျစုနှဈအတှငျးကမ်ဘာတလှားတှငျ ထိခိုကျမှုအမြားဆုံ ဖွဈပျေါစမေညျ့အန်တရာယျ(၅)မြိုး
(၄) ရာသီဥတုပွောငျးလဲခွငျးအားလြှော့ခခြွငျး နဲ့
စိတ်ကူးနဲ့လက်တွေ့ တစ်ထပ်တည်း မကျတဲ့အခါ နာကျင်အောင် ခံစားရတယ်။ အဲဒီနာကျင်မှုကိုသင်အလဲထိုးမလား…? နာကျင်မှုက သင့်ကိုအလဲထိုးတာကို ခံမလား…?
မှတ်သင့်တာကို မှတ်ပါ။ မေ့သင့်တာကို မေ့ပါ။ ပြုပြင်ပြောင်းလဲသင့်တာကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲပါ။ပြုပြင်ပြောင်းလဲလို့ မရတာကို လက်ခံနိုင်အောင် ကြိုးစားပါ။ လူ့ဘ၀ဆိုတာ တိုတိုလေး။ ခဏတာအချိန်လေးမှာ ၀မ်းနည်းစရာ၊ စိတ်ပျက်စရာ ဘာတစ်ခုမှ ချန်မထားခဲ့နဲ့။ ရီချင်ရင် ရီပစ်လိုက်၊ ငိုချင်ရင် ငိုပစ်လိုက်၊ ချစ်ချင်ရင် ချစ်ပစ်လိုက် ဘယ်ဖိအားနဲ့မှ ကိုယ့်ကို ထိန်းချုပ်မထားလေနဲ့။ …
သမိုင်းဓာတ်ပုံတစ်ခုကြောင့် ကျိုက်ထီးရိုးဘုရားတောင်ပေါ် အမျိုးသမီးတက်ရောက်ခွင့်ရှိ၊မရှိ အငြင်းပွားမူများရှိနေ
သမိုင်းသုတေသီကို အကြီးကျယ် ဆန္ဒပြမလား? ဒေါက်တာသန့်မြင့်ဦးရဲ့facebookမှာ 1865ခုနှစ်က ကျိုက်ထီးရိုးလို့ရေးသားထားတဲ့ဓါတ်ပုံပါ…ပုံထဲမှာ အနီနဲ့ဝိုင်းထားတဲ့သူတွေဟာ (ကျနော်ဝိုင်းထားတာပါ မူရင်းမဟုတ်)အမျိုးသမီးတဦးနဲ့ မိန်းကလေးငယ်တဦးလို့ ယူဆရပြီးသူတို့ဟာ ဒီနေ့ခတ်မှာအမျိုးသမီးမဝင်ရလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ တောင်ထွတ်ပေါ်မှာရှိနေတာပါ… ဒါဆိုရှေးအရင်ခေတ်တွေတုန်းက ကျိုက်ထီးရိုးစေတီကျောက်တုံးအနီးထိအမျိုးသမီးတွေဝင်ရောက်ဖူးမြှော်ခွင့်ရှိခဲ့သလားဆိုတာ စဉ်းစားစရာဖြစ်ပါတယ်…သိတဲ့မီတဲ့သူတွေရှိရင် အကိုးအကားနဲ့ ရှာဖွေဖော်ထုတ်ကြစေချင်ပါတယ်… အရင်ကရရင်အခုလည်းရသင့်ပါတယ် အမျိုးသမီးတွေကို တဆင့်နှိမ့်ခွဲခြားဆက်ဆံတာတွေပပျောက်ဖို့ ဒီလိုယုတ္တိမတန်တဲ့အယူသည်းမှုတွေကိုလည်း ဖယ်ရှားတော်လှန်ကြရပါမယ်… တဖက်မှာလည်း ငါ …